प्रदेश २ मा हाल सम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ६४ हजार ६सय ९० नागरिक सहभागी – Shirish News
प्रदेश नम्बर २ मा ८ वटा जिल्ला छन् । तीमध्ये ५ जिल्लामा मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ । प्रदेश २ मा २०७४ माघ २५ गते महोत्तरीबाट शुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यकम क्रमशःरौतहट,पर्सा,धनुषार सिरहामा लागु भैसकेको छ /बारा ,सर्लाही र सप्तरीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु हुने क्रममा रहेको छ । धेरै जनसंख्या भएको प्रदेश नम्बर २ मा अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ६४ हजार ६सय ९० नागरिक सहभागी भएका छन् ।
जसमध्ये सबैभन्दा बढी पर्सामा १८,३९२ , र सबैभन्दा कम धनुषामा ५,१९० रहेको छ / यसरि सिरहामा १६,८९३ ,रौतहटमा १३,४९९ र महोत्तरीमा ११,७१५ व्यक्ति सहभागी भएका छन् /
नेपालको संविधानले ‘नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने‘ प्रावधान गरेको छ। यो समयको माग हो। परम्परागत रूपमा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी खर्च सीमित हुन्थ्यो जुन स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सीधै तिर्ने गर्थे। तर हाल स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी खर्च आकासिँदै छ र क्यान्सर, हृदयरोग, चिनीरोग, मिर्गौलासम्बन्धी रोगजस्ता घातक रोगहरूको उपचारसम्बन्धी खर्च कतिपय अवस्थामा परिवारले धान्नै नसक्ने भएको छ। यस्तो अवस्थामा औषधोपचार गर्न घरवारै बेच्नुपर्ने वा औषधोपचार गर्न नसकी देहत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यो समस्या समाधानको लागि हाल विश्वका विभिन्न देशमा स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास बढ्दो छ। स्वास्थ्य बिमा भन्नाले सामान्यतः स्वास्थ्य खर्च बेहोर्ने कार्यक्रम भन्ने बुझिन्छ। यो रोग तथा दुर्घटनाका कारण हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी खर्चको जोखिमविरुद्धको बिमा हो। स्वास्थ्य बिमामा दुर्घटनाबाट भएको हानि–नोक्सानी, स्वास्थ्य खर्च, अपांगता वा आकस्मिक मृत्यु र अंगभंगताको बिमा संलग्न हुन्छ र यसले बिमित व्यक्तिको रोग तथा चोटपटकको उपचारमा लाग्ने खर्च बेहोर्छ। कुनै पनि स्वास्थ्य बिमा योजनाले तीन पक्षलाई जोड्छ: स्वास्थ्य योजनाका सञ्चालक, स्वास्थ्य योजनाका खरिदकर्ता र स्वास्थ्य सेवाप्रदायक। स्वास्थ्य योजनाका सञ्चालक बिमा कम्पनी जस्ता नाफामुखी, गैरनाफामुखी वा सरकारी संस्था हुन सक्छन्, स्वास्थ्य योजनाका खरिदकर्ता व्यक्ति अथवा कर्मचारीका तर्फबाट रोजगारदाता हुन सक्छन् भने स्वास्थ्य सेवाप्रदायक चिकित्सक र अस्पतालहरू हुन सक्छन्।
बीमा योजनाअनुसार प्रत्येक परिवारमा पाँचजनासम्मले स्वास्थ्य बीमा गराउन सक्नेछन् । पाँच जना सदस्य बराबर रू.३ हजार ५ सय बीमाशुल्क भुक्तानी गरे बापत उक्त परिवारले रू.एकलाख सम्मको स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गर्नेछन् । पाँच जना भन्दा बढी परिवार भएका खण्डमा प्रति सदस्य ७ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तर, अति गरीब बर्गमा परेका नागरिकलाई भने उक्त बीमा शुल्क शतप्रतिशत छुट हुनेछ । त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक,अपाङ्ग रातो कार्ड ,एमडीआर टिबि ,लेप्रोसी बिरामी हरुलाई निशुल्क हुनेछ । सरकारले गरीबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको परिचय पत्रको आधारमा गरीबीको पहिचान गरी छुट प्रदान गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा दर्ताका लागि छनौट भएका जिल्लाहरुमा प्रत्येक नागरिकको घरमै पुग्ने गरि स्वास्थ्य बीमा दर्ता सहयोगी खटाईएका छन् । सहयोगीहरुले परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई छुट्टा छुट्टै फर्म भर्न लगाउँछन् । यस्तो फर्म परिवारका सबै सदस्यले भर्नै पर्ने हुन्छ । यो फर्ममा भर्नु पर्ने सम्पूर्ण विवरण दर्ता सहयोगीलाई बताउनु पर्छ । दर्ता फारम भर्ने बेलामा तपाईले आफुलाई पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्था (सेवा लिने पहिलो स्वास्थ्य संस्था) रोज्नुपर्ने हुन्छ । यसरी स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्दा आफुलाई पायक पर्ने उपयुक्त लाग्ने स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, उक्त स्वास्थ्य संस्थासँग सरकारले स्वास्थ्य उपचारका लागि सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ । दर्ता सहयोगीले परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई बीमा गरेको परिचय पत्र प्रदान गर्छन् । सोही परिचय पत्रको आधारमा विरामी पर्दा अस्पतालमा उपचार सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमा १ बर्षका लागि मात्र मान्य हुने भएकाले, प्रत्येक बर्ष नविकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । कसरी प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सेवा ? स्वास्थ्य उपचारको लागि सरकारले विभिन्न अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरेको हुन्छ । स्थानिय तहमा रहेका स्वास्थ्य चौकी देखि सुविधासम्पन्न अस्पतालसँग सरकारले सम्झौता गरेको छ । विरामी परेको अवस्थामा सबैभन्दा पहिला स्थानिय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गराउनुपर्छ । यदि जिल्ला स्तरिय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रले उपचार गर्न नसकेको अवस्थामा केन्द्रको सिफारिशमा क्षेत्रियस्तरको सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न सकिनेछ । तर, अधिकत्तम एकलाख सम्मको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ । परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको खण्डमा प्रति सदस्य थप रु. २० हजारको स्वास्थ्य सुविधा लिन सकिन्छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा लागु गरेपनि यसअघी नै सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आएका स्वास्थ्य सेवा र सुविधा भने यथावत नै रहने छन् । कस्तो अवस्थामा बीमा रकम उपलब्ध हुदैन् ? सरकारले आम नागरिकका लागि भनेर ल्यायको स्वास्थ्य बीमा योजनामा सारिरीक सुन्दरता कस्मेटिक सर्जरी, गर्भधान, लिगं परिवर्तन, दाँतको सर्जरी, व्यक्तिगत झैझगडाका कारण लागेका चोटपटक, मादक वा लागूपदार्थ सेवनका कारणबाट भएका दुर्घटना, गर्भपतन आदिका लागि भने यो स्वास्थ्य बीमा उपयोग गर्न नपाईने बताएको छ ।
डोम समुदायलाई बल्याङकेट वितरण